Agbaze nke Antarctic Ocean nwere ike ime ka igwe ojii wuo | Netwọk Mgbasa Ozi
Agbaze Osimiri Antarctic nwere ike ime ka igwe ojii kpuchie
A na-eme ka okpomoku zuru ụwa ọnụ site na njigide nke okpomọkụ nke ikuku gas na-eme mgbe radieshon nke anyanwụ na-emetụta elu ụwa. Igwe anwụ a na-eme ka okpomọkụ na-amụba gburugburu ụwa ma na-abawanye na ụbọchị doro anya.
Nnyocha nke ndị ọkà mmụta sayensị sitere na Institute of Sciences Sciences nke CSIC nyochaala ihe nsonaazụ ahụ gbazee na usoro igwe ojii. Kedu ihe ha ga-eme na ibe ha?
Agbaze nke Antarctic Ocean
Dị ka ndị ọkà mmụta sayensị mere nnyocha si kwuo, mgbe akpụrụ gbazee n'ihi oke okpomọkụ ọ na-ewepụta nitrogen ikuku. Mmiri nitrogen a dị na mbara igwe na-akwado usoro igwe ojii. Ihe omumu a achoputala ihe ndi sitere na ndu microscopic nke bi na oke osimiri na mmiri gbara ya gburugburu.
Dị ka anyị si mara, agbaze nke pola ice caps gburugburu ụwa na-agbanye ume site na okpomoku ụwa na mgbanwe ihu igwe. Nke a gbazee nwere ike inyere emission nke bekee aka na-enyere guzobe igwe ojii. Etubeghi mgbanwe a n'uche na nyocha ọ bụla gbasara ihu igwe.
Iji ghọta ihe ọmụmụ a, ọ dị mkpa iji nyochaa ma lelee njikọ zuru ụwa ọnụ na njikọta njikọ niile n'etiti oke osimiri, akpụrụ mmiri, ikuku na ndụ. Igwe igwe ihu igwe a zuru oke ma ha dabere na ngosiputa siri ike ma kwụsie ike.
Ihe data a nwere ike ịgba ume, ebe ọ bụ na site n'igwe ojii ka mma, oke ikuku radieshon nke dara n'elu ụwa nwere ike belata, si otú a mee ka okpomoku ụwa dị nro. Ọzọkwa, oke mmiri ozuzo nwere ike ịkwụsị ụkọ mmiri n'ọtụtụ akụkụ ụwa ma kwado ka ahịhịa na-eto, nke n’aka nke ya na-emekwa ka e nwee igwe ojii ọhụrụ ma mekwa ka ihu igwe dị mma na iru mmiri zuru oke.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Agbaze Osimiri Antarctic nwere ike ime ka igwe ojii kpuchie
Igwe okpomoku nke mba China na-eyi egwu glaciers nke China